भारत-चीन युद्ध भए के होला ? कस्को सैन्य शक्ति कति | भारत-चीन युद्ध भए के होला ? कस्को सैन्य शक्ति कति – हिपमत
भारत-चीन युद्ध भए के होला ? कस्को सैन्य शक्ति कति
भारत र चीनबीच पटक पटक युद्ध भएको छ । तर, दुवै पक्षबीचको झडपमा कुनै पनि सैनिक नमरेको ४५ वर्ष भइसकेको थियो । सोमबार दुवै तर्फ सैनिक हताहती भएपछि ४५ वर्षसम्मको शान्ति तोडिएको छ ।
भारतका २० सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । चीनतर्फ हताहती भएपनि संख्या यकिन भनिएको छैन । तर, भारतको भन्दा चीनको बढी संख्यामा सैनिक मारिएको अपुष्ट समाचारहरु आइरहेका छन् ।
भारत र चीनबीच युद्धको कालो बादल मडारिइरहेको छ । वास्तवमा यी दुई देशबीच युद्ध भएमा परिणाम खरनाक हुनसक्छ । चीन विश्वकै बढी जनसंख्या भएको देश हो । भारत दोस्रो बढी जनसंख्या भएको मुलुक हो । दुवै देश आणविक अस्त्रले सम्पन्न देश हुन् ।
भारतभन्दा चीन झण्डै तीन गुणाले ठुलो छ । भारतले प्रतिवर्ष झण्डै ५६ अर्ब डलर रक्षामा खर्च गर्छ । चीनले २२८ अर्ब डलर खर्च गर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २.५ प्रतिशत भारतको रक्षा बजेट छ भने चीनको १.९ प्रतिशत छ । अमेरिकाको कुल रक्षा बजेटको ९ प्रतिशत भारतको र ३७ प्रतिशत चीनको देखिन्छ ।
भारतमा २१ लाख ४० हजार सैनिक र अर्धसैनिक बल छन् । कुल ३१ करोड ९१ लाख आवश्यकता अनुसार सैन्य गतिवधिमा तयारी अवस्थामा छन् । चीनमा २३ लाख सैनिक छन् । कुल ३८ करोड ५८ हजार सैन्य गतिविधिका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।
भारतसँग ४ हजार ४ सय २६ सैन्य ट्यांक छ भने चीनसँग ७ हजार ७ सय ६० छ । भारगतसँग युद्धक गाडी ५ हजार ६ सय ८१ छ भने चीनसँग ६ हजार छ । भारतसँग ५ हजार ६७ तोप छ भने चीनसँग ९ हजार ७ सय २६ तोप छन् ।
रकेट तोप भारतसँग २ सय ९२ वटा छ भने चीनसँग १७ सय ७० छ ।
वायुसेनामा भारतसँग कुल २२ सय १६ सैन्य विमान छन् । चीनसँग ४ हजार १ सय ८२ विमान छन् । युद्धक विमान भारतसँग ३ सय २३ वटा छ भने चीनसँग ११ सय ५० वटा छ ।
बहुकार्यको विमान भारतसँग ३ सय २९ र चीनसँग ६ सय २९ वटा छन् । युद्धक विमान भारसँग २२० र चीनसँग २७० छन् । भारतसँग सैन्य हेलिकोप्टर ७२५ र चीनसँग ११ सय ७० वटा छन् ।
नौसैनिकको तथ्यांक अनुसार भारतसँग कुल युद्धपोत २१४ वटा छन् । चीनसँग ७८० छन् । भारत र चीन दुवैसँग युद्धक विमान बाहक नौसैनिक जहाज २-२ वटा छन् । दुश्मनको जहाज ध्वस्त पार्न सक्ने भारतसँग ११ र चीनसँग ३६ वटा छन् ।
फ्रिगेट भारतसँग १५ र चीनसँग् ५४ वटा छन् । कोरभेट भारतसँग २४ र चीनसँग ४२ वटा छन् । समुन्द्रभित्र युद्ध गर्ने सबमेराइन भारतसँग १५ र चीनसँग ७६ वटा छन् ।
त्यसैले ठुलो सैन्य शक्ति भएका यी देशबीच युद्ध भएमा खतरनाक अवस्था आउनसक्छ । दुवै देशसँग आणविक हतियार रहेकाले युद्ध भएमा घातक हुनसक्छ । त्यसैले पनि यी दुई देशलाई संयमता अपनाउन विश्वले नै आग्रह गर्न थालेका छन् ।-आर्म फोर्सेस डट इयुको सहयोगमा
११ किलो चरेस सहित ३ जना पक्राउ